अपर तामाकोसीमा स्थानीयभन्दा सर्वसाधारणलाई बढी सेयर, न्यूनतम ४० कित्ता पाए ! « GDP Nepal
( Thursday, October 22, 2020)
अपर तामाकोसीमा स्थानीयभन्दा सर्वसाधारणलाई बढी सेयर, न्यूनतम ४० कित्ता पाए !
Published On : 27 November, 2018 5:51 pm
काठमाडौं । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अपर तामाकोसी हाइड्रोपावरमा स्थानीयवासीभन्दा बढी सेयर पाएका छन् ।
मंगलबार बाँडफाँड गरिएअनुसार सर्वसाधारणले ४० र ५० कित्ता सेयर पाएका हुन् । जबकि स्थानीयले न्यूनतम ३० कित्तादेखि अधिकतम १०२ कित्तासम्म सेयर पाएका थिए । अधिकतम सेयर पाउने हजारभन्दा कममात्र स्थानीय छन् ।
स्थानीयमध्ये ग वर्गका दोलखावासीले ३० र ३४ कित्ता सेयर पाएका छन् भने ख वर्गकाले ४० र ४८ कित्तामात्र सेयर पाएका थिए । उनीहरुले आफैं बैंकमा लाम लागेर ४ महिना कुरेपछि मात्रै सेयर पाएका हुन् भने कतिपयको पैसा अझै फितौ भएको छैन ।
तर, सर्वसाधारणले १ महिनाभित्रै सेयर पाएका छन् । सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको ७ लाख ९४ हजार २५० कित्तासहित कूल १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता साधारण सेयर गत कात्तिक १५ देखि १९ सम्म सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको थियो ।
नतिजाअनुसार ५० कित्तादेखि १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिने आवेदनहरुको ६ करोड ४६ लाख १८ हजार ८४३ कित्ता सेयरको लागि न्यूनतम ४० कित्ताका दरले १ करोड ३३ लाख ६३ हजार सेयर बाँडफाँड गरिएको छ ।
यस्तै फाँडफाँडबाट बाँकी रहेका १७ लाख २७ हजार ७५० कित्ता सेयरका लागि पुन ३ लाख ३४ हजार ७५ जना आवेदक मध्येबाट गोलाप्रथाद्वारा १० कित्ताका दरले कूल १ लाख ७२ हजार ७७५ जना आवेदक छनोट गरी थप गरिएको जनाइएको छ ।
सेयरका लागि ३ लाख ३९ हजार ७७५ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये १२ लाख ९८ हजार ९८० कित्ता सेयरका लागि परेको ५७०० जनाको आवेदन भने रितपूर्वक नभएको पाइएपछि रद्द गरिएको थियो ।
पत्रकारलाई तलब र दशैं भत्ता नदिने मिडियाविरुद्ध महासंघ कठोर, दशैं बीचमै आन्दोलन
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारलाई तलब र दशैं खर्च नदिने मिडियाको रवैयाप्रति आपत्ति
भारतसहित दक्षिण एसियामा कोभिड नियन्त्रण उन्मुख, नेपालमा भने सरकार अकर्मण्य !
काठमाडौं । कोरोना संकट सुरु भएयता बुधबार सबैभन्दा बढी मानवीय क्षतिमात्र भएन, संक्रमण दर पनि
प्रकृतिको अनुपम उपहारः गौरीशङ्करको लुवाङसा–बुकुनी हुँदै कालोपोखरी–पाँचपोखरी यात्रा
दोलखा । हिमाली जिल्ला दोलखाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने गौरीशङ्कर हिमालको काखमा अवस्थित प्राकृतिक स्रोत र
पर्यटन बोर्डलाई स्कल इन्टरनेशनलको प्रेसिडेन्ट अवार्ड !
काठमाडौं । यूरोपको स्पेनमा मुख्यालय रहेको अन्तराष्ट्रिय पर्यटन संस्था स्कल इन्टरनेशनलले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सन्